Umaki: isibhengezo sohlelo lokusebenza oluhlakaniphile | Martech Zone
Maka: isibhengezo sohlelo lokusebenza oluhlakaniphile
Uma ufundile ukushicilelwa kwami ​​nganoma yisiphi isikhathi esingeziwe, uyazi ukuthi ngingumuntu othanda i-Apple. Izici ezilula ezinjengokuthi ngizochaza lapha ezingenza ngazise imikhiqizo nezici zazo. Mhlawumbe uqaphele ukuthi lapho uvula isayithi eSafari ku-iOS ukuthi amabhizinisi ajwayele ukukhuthaza uhlelo lwawo lweselula nge-Smart App Banner. Chofoza ku-banner, bese uyiswa ngqo ku-App Store lapho ungalanda khona
Ungangeza Kanjani Ama-App Banners kuSayithi Lakho Leselula
NgoMsombuluko, Januwari 21, 2019 NgoMsombuluko, Januwari 21, 2019 Douglas Karr
Uma unohlelo lokusebenza lweselula lwemikhiqizo noma izinsizakalo zakho, uyazi ukuthi kungabiza kangakanani ukulikhangisa nokulisabalalisa ukuze litholwe ngobuningi. Ngabe bewazi ukuthi, ngamazwibela weheda elula, ukuthi ungaphromotha uhlelo lokusebenza ngaphakathi kwesiphequluli seselula? Ama-Apple App Store Smart App Banners e-iOS Apple asekela ama-smart app banner futhi iyithuluzi elihle lokukhulisa ukwamukelwa kohlelo lwakho lokusebenza lweselula. Lapho umsebenzisi weselula evakashela ifayela lakho le-
Thuthukisa i-iPhone App yakho nge-Smart App Banner
NgoLwesine, Novemba 29, 2012 NgoLwesine, ngoMashi 7, 2013 Douglas Karr
Ozakwethu ePostano Mobile, abantu abakhe i-iPhone App yethu, bangabantu abakhohlakele abasebenza nabo futhi bakhe uhlelo lokusebenza olungakholeki. Uma ungakahloli, ngicela ukwenze! Sesinamavidiyo ethu phezulu esicelweni manje - ungachofoza bese uwadlala ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza… kuhle lokho! Namuhla kusihlwa bangithumelele i-imeyili bangitshela ukuthi nginamathele ikhodi ye-Smart App Banner kunhlokweni yesayithi lethu leselula. Hlakaniphile